Jereo Mivantana Ny Vovonana Global Voices 2012! · Global Voices teny Malagasy
Jereo Mivantana Ny Vovonana Global Voices 2012!
Voadika ny 31 Desambra 2017 15:01 GMT
Vakio amin'ny teny Italiano, Swahili, বাংলা, Aymara, Español, English
(Fanamarihana: tamin'ny 3 Jolay 2012 no nanoratana ny lahatsoratra teny Anglisy)
Nisokatra tany Nairobi, Kenya (2-3 Jolay) ny Vovonana Global Voices 2012. Satrinay raha niaraka taminay tany ianareo kanefa afaka mijery ny lahatsary mivantana sy miresaka mivantana aminay ianareo raha tsy afaka nanatrika izany .
Nahitana mpandray anjara miisa 300 avy amin'ny firenena miisa 60 ity hetsika ho an'ny daholobe ity, bilaogera sy mpankafy ny fampitam-baovaon'ny olom-pirenena, 18 ka hatramin'ny 76 taona ry zareo. Ny hitrandraka ny maha-zava-dehibe sy ny lanjan'ny fampitam-baovaon'ny olom-pirenena antserasera manerana izao tontolo izao no tanjon'ny Vovonana .
Jereo ny bilaogin'ny Vovonana, ny fandaharam-potoana, ny tenirohy Twitter #GV2012, ary mazava ho azy ny lahatsary etsy ambany. Mizara roa ny ampahany sasany tamin'ny fandaharana ary azonao atao ny mijery ny tranonkalan'ny Vovonana misy ny pejin'ny lahatsary amin'ny fifidianana ireo lahatsary mivantana.
Manana sary mivantana nohavaozina ihany koa isika ao amin'ny Flickr: